hios76 | Smartphones TECNO
နည်းသလိုထင်ရပေမဲ့ အကျိုးရှိထိရောက်ပါတယ်၊ ရိုးရှင်းစုံလင်အသွင်ထဲမှာ အရာရာတိုင်း အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပေးပါတယ်
ရိုးရှင်းစုံလင်မှုကို နေရာတကာ ထားရှိလျက်၊ ဗားရှင်းအသစ်တွင် အဓိက ပါဝင်အကြောင်းအရာများကို အသားပေး ထုတ်ကြည့်ချိန်မှာ ပိုမိုတည်ငြိမ်သော HiOS အမြင်အာရုံ အတွေ့အကြုံ ခံစားရရန်အတွက် ရွှေအချိုးနဲ့ ခေါက်ချိုးညီပုံစံ၊ နေရာလွတ် အများအပြား၊ ကျစ်လစ်သိမ်သည်းတဲ့ ဖန်သားပြင် အစိတ်အပိုင်းများကို အလုံးစုံ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ထက်အောက်အလုံးစုံ စွမ်းရည်မြင့် ဉာဏ်ရည်နည်းပညာကို ဆောင်ကျဉ်းပေးထားခြင်း
စမတ်ကျသော လေးထောင့်ပုံများ ဖြည့်သွင်းထားသဖြင့်၊ ခေတ်မီသပ်ရပ်သော အဆင်အပြင်ပုံစံက သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အဆင်ပြေစေဖို့နှင့် အလုပ်မှာ အကျိုးရှိထိရောက်စေဖို့ အဓိကထား ပံ့ပိုးပေးမှာပါ။
ဖုန်းများအကြား မိုဘိုင်းဒေတာစီးဆင်းမှု သုညနှုန်းဖြင့် ဖိုင်များ လွှဲပြောင်းလိုသလား?HiOS7.6 ရှိ Phone cloner အသစ်က သင့်အား အလုံးစုံပံ့ပိုးမှု ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် သင့်ဒေတာအားလုံးကို တစ်ခါနှိပ်သုံး၍ နေရာပြောင်းထားနိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းများကို ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အနေအထားနှင့် ထောင့်ချိုးများက ပုံစံပြောင်းပြီး ကွေးကောက်နေပါသလား? စာရွက်စာတမ်း အမှန်ပြင်နည်းက ရုပ်လုံးမြင် အမှန်ပြင်နည်းနှင့် စာမျက်နှာအစွန်း ရှာဖွေရေး နည်းပညာကို သုံးထားပြီး သင့်စာရွက်စာတမ်းများကို အလိုအလျောက် နေရာမှန် ပြင်ပေးသည့်အပြင် အလွယ်တကူ နေရာမှန် ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံများမှ ရုပ်ရှင်အဖြစ်သို့ ဖန်တီးကြည့်ဖူးပါသလား? သင့်ဓာတ်ပုံအနည်းငယ်ကို ရွေးချယ်လိုက်ရုံနဲ့ သင့်လက်ထဲမှာ လူကြိုက်များတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ သင့်အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးအတွက် အထူးအောက်မေ့ဖွယ်ကို ဖန်တီးလိုပါသလား? သင်တို့ အတူအကွ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံများကို ရွေးပြီး အတူတူ ရှိခဲ့ကြချိန်အတွက် လူကြိုက်များတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ သင့်ဘဝမှာ အလေးထားရသူအတွက် မေ့မပျောက်နိုင်သော လက်ဆောင်မျိုး ဖန်တီးဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ရပါ!
ကလေးအတွက် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ပါဝင်အကြောင်းအရာများနှင့် အချိန်ကာလများဖြင့် သင့်ကလေးက ဖုန်းကို ကစားနိုင်သောကြောင့် သင်နှင့် သူ/သူမ၏ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ကလေး လဲလျောင်းပြီး ဖုန်းကြည့်သောအခါ ကလေးမုဒ်က ကိုယ်ဟန်နေထားအမှားကို အမှန်ပြင်ရန် သူ/သူမအား ချက်ချင်း သတိပေးပါမည်။
Voice Changer က သင့်အသံကို အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုး ကျား၊မ လိင်အမျိုးမျိုး ပုံစံနဲ့ အသံဖျက်ပေးခြင်းဖြင့် ချတ်လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီးပျော်စရာ ဖြစ်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသံပြောင်းစက်က သင် လိုချင်တဲ့ အသံ အထူးပြုလုပ်ချက်များကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ယခုဆိုရင် သင့်အသံကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြောင်းပြီး သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ကျီစယ်ကစား ပျော်ပါးကြပါ!
ချောင်းကြည့်ခြင်းမှ ကာကွယ်နည်းကို သင့်ဖုန်း၏ ပြသမျက်နှာပြင်အား မှေးမှိန်လာအောင် ဒီဇိုင်းထွင်ထားသဖြင့်၊ လူအများကြား သင့်ဖုန်းကို သုံးနေချိန်မှာ သို့မဟုတ် ချတ်လုပ်နေချိန်မှာ သင့်ပခုံးကိုကျော်ပြီး ချောင်းကြည့်ဖို့ ခက်ခဲလာပါမယ်။
Vault 2.0 က သင့်လူမှုမီဒီယာအက်ပ်များကို ဝှက်ထားပေးပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများကို ကုဒ်ပြောင်း၍ ဝှက်ထားပေးပါမယ်။ ယခုဆိုရင် သင်က သင့်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ဘက်ပေါင်းစုံ ကာကွယ်နိုင်ပါပြီ၊ အချက်အလက်များ ပေါက်ကြားတော့မည် မဟုတ်ပါ!